ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း - YOYARLAY Digital Media and News
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါက ကျွန်တော်တို့ကို အိမ်မှာပဲနေစေခဲ့ပါတယ်။ အိမ်မှာနေတာများလာတော့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းတာနဲ့ အလုပ်ဖိအားတွေက စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေများလာစေပါတယ်။ တိုးလာတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲပ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိတာတွေက ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆိပ်အတောက်ပမာဏကိုလည်း တိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအဆိပ်အတောက်တွေကို ပိုက်ဆံနည်းနည်းနဲ့ ဖယ်ရှားလို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အများစုက မနက်ရောက်လာတာနဲ့ ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးကြရပါတယ်။ အထိုင်များတဲ့သူတွေက ခါးနာတာ၊ ခြေထောက်ကျင်တာ၊ လေးလံထိုင်းမှိုင်းတာတွေလို့ ပြဿနာတွေ ခံစားကြရပါတယ်။ တစ်ခါတရံ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခြေထောက်နာကျင်တာက သင့်ရဲ့အိပ်စက်ချိန်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာရပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့အဲဒီပြဿနာတွေကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်တဲ့ အလွယ်ကူဆုံးနည်း (၂) နည်းကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ပန်းသီးအရက်ဗင်နီဂါရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေများတယ်ဆိုတာကို လူတိုင်းသိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်က အဆိပ်အတောက်တွေဖယ်ရှားချင်ရင် သင့်ခြေထောက်ကိုလည်း အဆိပ်အတောက်ဖယ်ရှားရပါတယ်။ ပန်းသီးအရက်ဗင်နီဂါသုံးပြီး အဆိပ်အတောက်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုရင် ပန်းသီးအရက်ဗင်နီဂါ (စားပွဲတင်ဇွန်း (၁) ဇွန်း)၊ ဆား (စားပွဲတင်ဇွန်း (၂) ဇွန်း)၊ မရှိမဖြစ်ဆီ (၃-၄) စက်နဲ့ Moisturiser တွေ လိုအပ်ပါတယ်။
ပုံးတစ်ပုံးနဲ့ ရေနွေးနွေးလေးယူပြီး ရေက ဒူးအောက်လောက်ထိရှိရပါတယ်။ ရေကို အရမ်းမပူပါနဲ့။ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို Moisturizer ကလွဲလို့ ရေထဲကို ထည့်ပြီး ရောစပ်လိုက်ပါ။ ခြေထောက်ကို (၁၅) မိနစ်လောက် ရေထဲစိမ့်ထားပါ။ ပြီးရင် ရေစင်အောင် အဝတ်နဲ့သုတ်လိုက်ပြီး ခြေထောက်ကို Moisturiser လိမ်းပေးလိုက်ပါ။
သင် အချိန်ရရင် နာရီဝက်လောက်လဲလျောင်းနေလိုက်ပါ။ ရေထဲမှာ ခြေထောက်ကို စိမ့်ပြီးနောက် သွေးကြောတွေ နူးညံ့လာပါလိမ့်မယ်။
ရေနွေးနွေးလေးက ခြေထောက်နာကျင်တာကိုလျော့ချတဲ့နေရာမှာ တကယ်ထိရောက်ပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေတဲ့အတွက် သွေးအတွင်းက အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကို တိုးလာစေပါတယ်။ ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့အောင် ကူညီပေးသလို ညဘက်ကိုလည်း ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။ ရေထဲကို ဆားထည့်တာက နာကျင်မှုကို ကုသပေးတဲ့နေရာမှာ အကူအညီဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အဆိပ်အတောက်တွေ ဖယ်ရှားဖို့ဆိုရင် ခြေထောက်က အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးရပါတယ်။ နောက်ထပ်လွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းက မုန်ညှင်းဆီ၊ ပန်းရောင်ဆား၊ သံပုရာနဲ့ ရေနွေးနွေးတို့ကို အသုံးပြုတာပါပဲ။
ခြေထောက်ကို မုန်ညှင်းဆီ၊ ပန်းရောင်ဆား၊ သံပုရာသီးတို့နဲ့နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ရေနွေးနွေး (၁) ပုံးယူပြီး သံပုရာသီး (၂) လုံးညစ်ထည့်၊ ပန်းရောင်ဆားအနည်းငယ်တို့ကို ထည့်ပြီး ခြေထောက်ကို မိနစ် (၂၀) လောက် ရေထဲ စိမ့်ထားပြီး နှိပ်နယ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီနည်းက သင့်ခြေထောက်ညောင်းတာကို သက်သာစေရုံသာမက ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း အဆိပ်အတောက်ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
ပန်းရောင်ဆားမှာ သံဓာတ်၊ အိုင်အိုဒင်း၊ ဆိုဒီယမ် ကလိုရိုက်နဲ့ အခြားသတ္တုဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ ရေထဲကို ဆားထည့်လိုက်တဲ့အခါ ဆားမှာပါဝင်တဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေက ရေမှာ ပျော်ဝင်သွားပါတယ်။ ရေထဲမှာ ခြေထောက်စိမ့်လိုက်တဲ့အခါ သတ္တုဓာတ်တွေက အရေပြားရဲ့အလွန်သေးငယ်တဲ့ချွေးပေါက်ကနေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်ရောက်သွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
Ref: The easy way to detox your body is by detoxing your feet. Here’s how
Previous Previous post: ကြီးမာကောင်းမွန်ပြီး ဆန်းသစ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များနဲ့ OPPO A52 ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်မှာ စတင်မိတ်ဆက်
Next Next post: လူ၊ တိရစ္ဆာန်၊ အသိဉာဏ်နဲ့ ဇုစ်နတ်မင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်
နှုတ်ခမ်းနီတွေက လူကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသွားစေနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် နှုတ်ခမ်းနီ အများစုမှာ ခဲဓာတ်၊cadmium၊ chromium၊ aluminum နဲ့ အခြားအဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်း ၅ မျိုးပါဝင်နေတယ်၊လို့ ကယ်လ်လီဖိုးနီးယားက သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာမှုအရသိရပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီက အမျိုးသမီးအများစုအတွက် အရမ်းကိုအရေးပါလှတဲ့ အလှကုန်တစ်မျိုးဖြစ်သလို အနှစ်သက်ဆုံး…
Published: May 2, 20193:29 pm Updated: May 13, 20194:06 pm
အိုင်းစတိုင်း (Einstein) မှားခဲ့တဲ့ အချက် ၃ ချက်
အလုံးစုံပြီးပြည့်စုံတဲ့လူ မရှိဘူးတဲ့။ (Nobody’s perfect!) ။ အိုင်းစတိုင်း ( Einstein) လို လူတောင်မှ မှားခဲ့သေးပါသတဲ့။ “သူရဲ့ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်မှုတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်တော့ အိုင်းစတိုင်းဟာ အမှား များများစားစား မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ တချို့အချိန်တွေမှာတော့ ကောက်ချက်အလွဲတွေ…
Published: June 8, 20183:29 am Updated: July 3, 20202:47 pm
ဟင်းချက်၊ကြော်လှော်တဲ့အချိန်တွေမှာ ဆီပူလောင်တာ၊ အပူလောင်တာတွေကို လူတိုင်းအဖြစ်များကြပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ အရမ်းနာပြီး အသားရေမှာ အနာကျန်ခဲ့တာ၊ ရောဂါပိုးမွှားဝင်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆီပူလောင်တဲ့အခါတိုင်း၊ အပူလောင်တဲ့အခါတိုင်း ချက်ချင်းကုသပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆီပူလောင်ပြီးဆိုတာနဲ့ အရေးပေါ်ဘယ်လိုကုသပေးရမလဲဆိုတာကို စာဖတ်ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။ ရေအေး၊…
Published: September 9, 20194:24 pm Updated: 4:30 pm